SIXID: Diiwaanka Maansada Timacadde- (Maansayahankii aan muraadsiga aqoon!) | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM SIXID: Diiwaanka Maansada Timacadde- (Maansayahankii aan muraadsiga aqoon!)
July 7, 2017 - Written by Mustafe Faro
WQ: Yuusuf Cabdille Cismaan “Yuusuf-Shaacir”
Diiwaanka Maansada Timacadde- Maansayahankii aan muraadsiga aqoon! (WQ: Yuusuf Cabdille Cismaan “Yuusuf-Shaacir”)
Qabyaalad iyo jeeroo la naco qaadkan lagu waashay
Qasti jeeray wada yeelatoo qawlka ku heshiiso
Qabyo weeye Soomaaliyeey qiiradaadaniye
14kii June 2017 shirkadda daabacaadda ee Sagaljet waxay iigu deeqday nuqul ka mid ah Diiwaanka Maansada Timacadde ee uu qoray Boobe Yuusuf Ducaale oo dhawaan soo baxay. Sidaan filayo, dhawaan ayaa la soo bandhigi doonaa. Guud ahaan waa buug soo-jiidasho leh marka loo eego qaabka uu u diryaarsan yahay, waxaanay markiiba ishaadu ku dhacaysaa sawirka Alle ha u naxariistee Marxuum Timacadde oo jaldiga sare ku yaalla. Waa daabacaaddii saddexaad oo sida muuqata shin-dhalad, tuur iyo tarbiicaba laga hufay. Intii aan buug suugaaneed arkayay waa kii ugu maansooyin badnaa, waxaana ku daabacan 150 maanso.
Cabdillaahi Suldaan oo ku caan baxay Timacadde wuxuu safka hore kaga jiray halyeeyadii tirada iyo tayadaba lahaa ee naftooda u sadqeeyay halgankii gobanimo-doonka ama soo hooyay calanka maanta Soomaalidu ku faanto. Hibooyin is barkan ayaa Alle ku mannaystay Timacacde. Wuxuu ahaa maansoyahan Alle u sakhiray curinta ama falkinta tixeed sida uu isaguba ku sheegay dhawr gabay oo ay ka mid yihiin “Masoo ururiyo ee kayga waan igadh salaaxaaye” iyo “Meer meeri mayo oo tixaan meel dhaw ku ogaame.”
Waxaa kale oo cajiib ahayd haybaddii iyo luuqdii uu ku hantiyay dhegeha dadwaynaha taas oo aragtidiisa maanseed u gudbisay si sahlan iyadoo aanu marnaba ka leexan mabaadii’dii uu u taagnaa ee ay ka mid ahaayeen waddaniyadda kuwaas oo ka dhex muuqda maansooyinkiisa sida uu ku sheegay tixo dhawr ah oo uu si guud dadweynaha ugula hadlayey. Isaga oo ka digaya gacmo hoorsiga waa kii lahaa:
Midigtaadu waxay xoogsataa maydha gaajada’e
Magaabada hashaadaa ka roon, maydhanaan kale’e.
Cabdillaahi Suldaan wuxuu ka maansoon jiray qaybaha kala duwan ee nolosh sida dhaqanka, aqoonta waddaniyadda, wadajirka, midnimada bulshada iyo wacyigalinta umadeed. Dhinaca kale wuxuu si farshaxan ah u tilmaami jiray diinta islaamka isagoo aan baryada Alle aan ka ciijisi jirin. Bal eeg geeraarkan la-yaabka leh ee xamdi-naqa ah:
Casiiskii Nebi Luud
Kuwii caasi gareeyey
Ama ceebta yaqaanay
Habeen cawda u gooyay
Ilaahii Nebi Ciise
Cilmigiisa ku qaaday
Ee Cashaduu iman doono
Cawar seef ugu dhiibayaw
Ilaahii caadil ahaayeen
Waxba kuu caban maynoo
Adaa caalimul- qayb ah.
Maansada Timacadde laba qodob ayaa ugu mudnaa. Midi waxay ahayd xornimo-doonkii aan xuduudda lahayn, ta kalena waxay ahayd digniintii uu ka bixin jiray xumaanta iyo dib-u-dhaca qabyaaladdu leedahay. Tusaale kooban waxaa inoogu filan xilli uu socday dagaal sokeeye oo u dhexeeyey beeshiisa iyo beel kale ayaa lagu dirqiyey in uu maanso tiriyo oo uu u jawaabo gabyaa ka soo jeeday beesha kale. Haseyeeshee jawaabtii uu bixiyey waxay noqotay mid ka duwan tii la filayey. Indheer-garanadnimadiisu waxay keentay in Timacadde dhinacyadii is ka horjeeday uu ka dhigo ardaa kali ah. Waxaanu tiriyey tixdan si weyn loogu soo hal-qabsado:
Doc hadday u wada jeesatoo dhawrto danaheeda
Ooy duul walaala ah tahay duunka ka heshiiso
Dadka kama yaraateen ee ways dabar jaraysaaye
Dubbe madaxa ways kala dhacnaa daa’in abidkeene
Goortay iswada tooxataa daad u soo galay’e
Dugsi male qabyaaladi waxay dumiso mooyeene
Marka isaga oo muujinaya nacaybka uu qabyaaladda u hayay waxa uu yidhi:
Nin qabyaalad beertaw wanaag kuuma soo boxo iyo
Nin qabyaalad heen saynayaa guul ma haybsado
Abwaanku waxaa kale oo uu siwayn ugu suntan yahay halgankii xornimo-doonka ahaa. Suugaantiisu waxay ahayd guubaabo, kincin iyo caroog ka nixiya gumaysigii dalka haystay, taasaana sabab u ah in qof kasta oo bulshada ka mid ah ay isugu xidhanto calansaarkii 1960-kii iyo geeraarkii Timacadde ee uu lahaa:
Sayr mawaydo daroortay
Oo siigadii naga maydhayaw
Cidina kaanay nasiine
Saatir noogu yaboohayaw
Sarreeyow ma nusqaamow
Saaxirkii kala guuraye
Aan siduu yahay eegno’e
Kaana siib kana saar
Dawladihii kala dabeeyey ee rayidka ahaa oo taariikhda ku galay eex, musuq iyo qaraabo-kiil Timacadde iyo qayrkiiba suluug weyn ayay ka muujiyeen. Waana tii keentay fursaddii uu ka faa’iidaystay kacaankii askartu hoggaanimaysay ee inqilaabka kula wareegay taladii dalka, walow aanu nidaamkii Kacaanka laftiisa wax badan la shaqayn marka laga reebo dhawr tixood oo dhiirigelin ah oo uu bilawgii Kacaanka curiyey kuwaas oo uu ku doonayey in wax laga qabto musuqa, eexda iyo wixii la mid ah. Waa kii lahaa:
Dhunkaal shilinku jeeruu noqdoo dhuunta mari waayo
Dhacarsiga ladayn maayo iyo dhiilkii lays baray’e
Dhaabbadaa aan soo jilay haddii laga dhabayn waayo
Dhutis xaalku kama baaqsadee dhuuxa hadalkeyga
Ale naxariistiisa hawgu deeqee 1973kii ayuu Timacadde ku xijaabtay Kalabaydh oo galbeed kaga toosan malaalada Gabiley. Geerida Timacadde oo naxdinteeda lahayd waxay ka hadlisay hal-abuurkii magaca ku lahaa dhinaca suugaanta. Aan soo qaadano tixdii Damaq iyo Xusuus ee uu Gaarriye ku sifeeyay Cabdulaahi Suldaan.
Xaqa sheeg ha joogtee
Dan ku xeeban jirine
Xeeli hadal ku caan baxay
Mabda’ aan la xadi jirin
Suugaanta xaramka ah
Xurmadeedi yaa marin
Haddii uu xabaal galay
Haddii xawda laga jaray
Xakamihii yaa sudhi
Abwaan Hadraawi qoraal uu ku daray Diiwaanka Maansooyinkii Timacade wuxuu ku yidhi:
Cabdillaahi Suldaan shaqsiyaddiisu waxay ku guda jirtaa gabayadiisa iyo erayadiisa. Gabayadiisa iyo erayadiisuna waxay ku dhexjiraan codkiisa. Codka Cabdillaahi Suldaan cid waliba way ku qasbanayd in ay u dhegtaagto. Cabdullaahi Suldaan shaqsiyaddaas ayuu ahaa xayga ah ee aan inta xabaal lagu riday laga dareerin. Ilaa maanta Cabdillaahi Suldaan wuu dhex joogaa dadka aqal walbana wuu yaallaa. Dareen kasta oo qof leeyahayba wuu weheliyaa, dhacdo kasta oo waddaniya Cabdilaahi Suldaan waa ka kaw. Mawqifka aan Cabdillaahi Suldaan ka taagnahay waa mid ixtiraam leh, xaqdhawr leh, mudnaan leh, kalgacal leh. Waa taa ta uu xaggayga ku leeyahay Cabdilaahi Suldaan. Ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo, innagana gabayadiisu meel ha inoo buuxiyeen.
Wixii ay hal-abuurku ka yidhaahdeen Timacadde aan ku lingaxo geeraarkii ducada ahaa abwaan Xuseen Aw Faarax.
Alle haw naxariisto
Oo ha u nuuro xabaasha
Iilka neecaw udgoon iyo
Haku siiyo naruuro
In uu naar ka xoroobo
Nabigii la xidhiidho
Nasiibkiisa la geeyo
Jannada uu ku negaado
Nimcadeeda ku waaro
Xuurayl cayn ku nikaaxo
Niyaddaan ka duceeyaye
Raxmaankoow iga yeel.
Ugu dambayn, Boobe Yuusuf Ducaale oo muddo soddon sanadood ka badan ku raad joogay sooyaalka Timacadde wuxuu innaga furtay xil iyo waajibaad ummadeed. Waxaan odhan lahaa, anigoo soo amaahanaya tixdii Cali Sugulle uu Muuse Galaal ugu boroor diiqay “Waad gudatay Boobow xilkii kula gudbaanaa.”